Gaarigeyga ayaa la iga jiitay. Dib ma u soo ceshan karaa alaabadeyda? | LawHelp Minnesota
Ka cabsi qabid guri ka saarid waayo kiro ayaa lugugu leeyahay? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211.
Ma ka walwalsan tahay silcin?
Halkan riix si aad uga baxdo shabakadan iminka.
Hadii aad khatar ku jirto, wac 911 ama Khadka (Day One Crisis Hotline) ee ah 1-866-223-1111.
Ka Caawinaya reer Minnesota xalinta wixii dhibaatooyin ah ee dhanka Sharciyada ka haysta
Anaga nagu Saabsan
La soo xiriirida
Rug ama Gargaar Bixiyaal
Il-marinta Iskaa isu Caawinta ah :
Gaarigeyga ayaa la iga jiitay. Dib ma u soo ceshan karaa alaabadeyda?
Eegida ama daabicida dukumiintiyada
Try our Quiz
After you're done reading this page, take a short quiz to test what you've learned!
Gaariga waa la jiidan karaa oo “la haysan karaa” dhawr sababood dartood:
Si aan sharci aheyn ayaad u dhigtay, ama meel ayaad uga tagtay muddo dheer
Haddii aad dhigto dhinaca khaladka ah ee wadada xilliga xaaqitaanka barafka.
Haddii ay jiraan tigisho badan oo aadan bixin.
Haddii uu gaariga jabo oo aadan dhaqaajin intii muddo ah.
Haddii ay taasi dhacdo, waxaa laga yaabaa in aad alaabadaada kala bixi karto gaariga haddii aadan gaarigaaga markiiba soo ceshan karin.
Sidee ayaan ku ogaanayaa halka uu yaalo gaarigeyga?
Waxaa laga yaabaa in gaarigaaga uu yaalo goobta gawaarida la dhigo ee magaalada ama meel gaar ah oo shirkadda qandaraaska heysata leedahay. Waxa aad wici kartaa xafiiska magaalada gaariga loo qaaday.
Haddii gaarigaaga laga jiiday goobta gawaaarida la dhigto oo gaar loo leeyahay ama goob ganacsi, oo ay ku taalo calaamad ay ku qoran tahay magaca iyo telefoonka shirkadda gawaarida jiida.
Waxa aad isku dayi kartaa in aad wacdo goobaha gawaarida la jiido la geeyo ee degaanka ama aad fiiriso bogooda haddii ay hayaan gaarigaaga. Ma jiro number ama bog internetka ah oo laga eegi karo gobolka oo dhan. Waa in aad baartaa goobta la geeyo gawaarida la jiido ee magaalada ama degmada.
Haddii gaariga ay jiido ama ay dhigto goobaha gaadiidka la dhigo hay’ad ka tirsan dawladda, waxaa laguu soo dirayaa 5 cisho gudahood waraaq ay ku cad yihiin:
Xilliga gaarigaaga la jiiday iyo halka laga jiiday.
Macluumaadka ku saabsan gaarigaaga, sida sanadka, cidda sameysay, nooca iyo lambarka taxanaha ah ee gaariga.
Halka uu yaalo gaarigaaga
Waraaqda waa in ay sidoo kale kuu sharaxdo
Xaqa aad u leedahay in aad gaarigaaga dib u soo ceshato iyo lacagta lagaa doonayo in aad bixiso.
Maxaa dhacaya haddii aadan la soo xiriirin si aad u hesho gaarigaaga muddo gaaban
Mudada aad heysato in aad ku qaadato gaarigaaga
Sida aad ku heli karto alaabada gaariga kaa saaran
Ma kala soo bixi karaa alaabada gaariga iga saaran?
Haddii dakhligaagu yar yahay, sharciga gobolku waxa dhigayaa in gaariga lagaa jiiday aad kala soo baxdo dhamaan alaabada kaa saaran. Taasi waa alaabada ku jirta gudaha gaariga. Ma aha biraha gaariga sida taayarada, batariga, raadiyaha ama DVD, qalabka ku rakiban gaariga. Xitaa haddii uu yahay qalabka DVDga ama kan miyuusigga ee aad ku rakibtay gaariga ma qaadan kartid.
Waa in aad weydiisataa oo alaabada kala soo baxdaa ka hor taariikhda laguu qabtay. La xiriir goobta la dhigay gaariga sida ugu dhaqsaha badan! Waxaa suurogal ah inaad heysato wax aan ka badneyn 15 cisho haddii gaariga la geeyey goobta la dhigo gawaarida ee Minneapolis ama St. Paul. Waxaa suurogal ah inaad heysato ilaa 45 cisho haddii gaariga la geeyey goobta la dhigo gawaarida Minnesota gudaheeda. Waa in aad keyntaa cadeyn in aad tahay mulkiilaha gaariga. (akhri xagga hoose)
Lacag miyaa la iiga qaadayaa in aan kala soo baxo karaa alaabada gaariga iga saaran?
Waxa ay ku xiran tahay dakhligaaga iyo haddii aad qaadato gargaarka dawladda. Haddii aanu dakhligaagu yareyn oo aadan qaadan gargaarka dawladda lacag ayey kaa qaadi karaan iyo dhamaan lacagta gaariga lagu jiiday oo meel lagu dhigay iyo lacagta kale ee lagugu leeyahay haddii ay jirto. LAAKIIN, haddii uu dakhligaagu yahay alaabada waxaa lagugu siinayaa lacag la’aan haddii aad la timaado cadeyn ah in aad tahay mulkiilaha gaariga oo ay tahay in lagaa yareeyo lacagta maadaama lagu siiyo (gargaarka dawladda)
Sidee ayaan ku cadeyn karaa taas?
Si aad u cadeyso in aad ka soo baxdo shuruudaha lagaaga yareynayo lacagta “maadaama lagu siiyo gargaarka dadweynaha,” waraaq ka soo qaado degmada, legal aid ama hay’ad kale oo aan faa’iido doon aheyn oo cadeysa in aadan heysan hoy ama aad gargaar ka hesho mid ka mid ah barnaamijyadan:
MFIP ama DWP (Barnaamij shaqo oo dadku saacadi shaqeeyaan)
Caymiska caafimaadka gobolka (MA) ama MinnesotaCare
Gargaarka guud (GA) ama gargaarka degdegga ah (EGA)
Gargaarka kabitaanka ah ee Minnnesota (MSA)
Gargaarka MSA ee degdegga ah.
Gargaarka SNAP benefits (cuntada)
Kabitaanka Dakhliga ee Lambarka Bulshada (SSI)
AMA- waxa aad keeni kartaa cadeyn muujineysa inaad ka soo baxday shuruudaha ku xiran:
Canshuur dhaafka dakhliga (EITC) ama canshuur dhaafka qoysaska shaqeeya ee Minnesota.
Adeegga legal aid
Yaa alaabada kala soo bixi kara gaariga la geeyay goobaha lagu xareeyo gawaarida?
Inta badan mulkiilaha gaariga ayaa kala soo bixi karaa laabada aariga saaran. Qaar ka mid goobaha la dhigo gaadiidka way ogolaadaan in qof kale qaadi karo alaabada haddii uu la yimaado waraaq uu mulkiilaha ku ogolaanayo oo leh shaabadda nootaayada. Waa in mulkiiluhu weli cadeeyaa in uu yahay hoy laawe, la siiyo gargaarka dadweynaha ama adeegga legal aid ku heli karo lacag la’aan.
Haddii aadan laheyn gaariga, laakiin ay alaab kaa saaran tahay, goobaha qaarkood waxa ay ogolaadaan in aad kala bixi karto alaabadaas haddii aad cadeyn karto in aad leedahay. Tusaale ahaan, haddii ay kaa saaran tahay aqoonsi, boorso magacaaga ku qoran yahay ama dhalo daawo ah.
Gaarigeyga ma ku soo ceshan karaa lacag la’aan?
Maya. Marna xaq uma lihid in aad gaarigaaga lacag la’aan ku heshi iyada oo aan loo eegin xaaaladda dakhligaaga.
Haddii gaarigaaga dib lagaaga ceshtay
Haddii gaarigaaga dib lagaag ceshtay, ma heysan karaan alaabada kaa saaran gaariga. Waa in aad la hadashaa cidda gaariga dib u ceshatay (bangiga ama deyn bixiyaha) si aad u ogaato sida aad ku heli karto alaabada kaa saaran gaariga.
Gargaarka (LSC) da ee shabakadani waxa uu ku kooban yahay waxyaabaha waafaqsan xadidaaddaha ay leedahay (LCS) du.
© 2021 Legal Services State Support is a project of the Minnesota Legal Services Coalition (MLSC)
Qarsoodi ka dhigida macluumaadka
Ka Baxid dedeg ah